ikhaya Kutheni i-Untold Biography Facts
Kubalandeli beBhola ekhatywayo, ukufunda malunga neBiogragi yebhola ekhatywayo bahlala bephembelela, bakhuthaze, kwaye banike inkuthazo. Kungenxa yoko le nto iBhola yethu yeBhola ekhatywayo ye-Biografics ikhona !!
Ibhola njengokuba sisazi ayinakuze iphele. Nangona indlela edlalwe ngalo umdlalo ivele kwiminyaka edlulileyo, amabali amnandi angazange ayeke ukuvelisa anokuphinda zikhumbule iinkumbulo zebhola ekhatywayo zeaficionados ezizukulwaneni.
Amabali ajikeleza ikakhulu kubadlali, abaphathi kunye nabantu abaphambili kwimidlalo bayabamba, bayachukumisa, bayachukumisa kwaye kunjalo, nasiphi na isichazi esifanelekileyo abafundi, abaphulaphuli kunye nababukeli banokuzibandakanya ukuchaza iimvakalelo ezikhuselayo ezinokuthi zimiswe ngamabali abo ezingqondweni zabo.
I-Lifebogger ibalisa amabali ahlekisayo malunga nabadlali bebhola, abaphathi kunye nabantu abadumileyo. IiCredits zemifanekiso: LB.
Into ebalulekileyo eyenza amabali ahlekise ngento yokuba angatyibeki engaphaya kwengqwalaselo yeqonga ledijithali yobugcisa Lifebogger egqumayo kubugcisa bokubhaliweyo kunye nobugcisa obumnandi bokubhalwa kwebhola ekhatywayo yeenkcubeko.
At I-Lifebogger, Siyazingca ngokuba ngumthombo wedijithali wobuchule bamabali ekhatywayo ayinyani kwaye angachazwanga ayinxalenye ebalulekileyo yamabali amnandi esiwazisayo malunga nabaphathi bebhola ekhatywayo bebhola kunye nabantu abadumileyo kwihlabathi liphela.
I-Lifebogger yindawo yokuma yedijithali yamabali ebhola ekhatywayo. Ityala lemifanekiso: LB.
Ngamafutshane, eli nqaku lijolise ukunika abaphulaphuli bethu umbono oqinisekileyo wento esiyenzayo ngokubonisa iinyani zebhaybhile ezingabalulekanga okanye ezingabalulekanga kakhulu kubaphathi bebhola, abaphathi kunye nabaphakamileyo phantsi kwezihloko ezinemibhalo yokufunda okuhle.
Amabali obuntwana - Abaphathi beBhola abangazange badlale iBhola eKhatywayo
Ibhola ayikhe iyeke ukukhupha iinkolelo ezithandwayo kunye nemibono. Olunye lolo luvo lubonisa ukuba abantu abangazange badlale ibhola yebhola ekhatywayo abanakho- kubi - babe ngabaphathi bebhola okanye - baphumelele ngokufanelekileyo kulawulo.
Njengoko iinkolelo esele zikhankanyiwe ngaphambili bezibonakala ngathi zisiba zezona nyaniso zibalulekileyo, Maurizio Sarri uphume eblue ukuba aqalise umsebenzi wakhe wokuqeqesha kwii-1990s nge-League Club AC Sansovino esezantsi ngelixa UAndre Villas-Boas uqale njengomqeqeshi oncedisayo ePorto phaya ngase1990's.
UAndre Villas-Boas kunye noMaurizio Sarri khange badlale ibhola kwinqanaba lobuchule ngaphambi kokuba baqale ukuqeqesha. Ii-Credits Zemifanekiso: WAGNH.
Kutheni i-Untold Biography Facts - Abadlali beBhola ekhatywayo ababenazo iiManejala
Izikolo ziphantse azinakwenzeka kwimidlalo yeqela ngakumbi kwibhola ekhatywayo apho abadlali benza khona into abaphembelela "ubushushu bomzuzu". Ngelixa ukuphinda kubuye kujongane okanye ukuziqhatha ngabantu abadlala ngokuchasene nabachasi babo kuthiwe “ziqhuba kakuhle iingcali”, kuya kuba njalo xa iingqondo zebhola zithatha ubushushu kubaphathi bazo.
Abalandeli beBarcelona babengekhe bakhawuleze ukulibala i-feud ende phakathi komphathi wangaphambili weklabhu Pep Guardiola kwaye phambili UZlatan Ibrahimovich ngokuchaza kwakhona ukuba u-Guardiola wathetha naye kabini kwiinyanga ze-6. Kwimbambano enzima ngakumbi, abalandeli beReal Madrid bahlulwe phakathi kokuxhasa Iker Casillas or Jose Mourinho xa i-duo yayinomdla ongafanelekanga koko umqeqeshi wakuqonda ukungcatsha kwegoli laseSpain.
UZlatan Ibrahimovich kunye no-Iker Casillas bobabini baneengxabano ezikrakra nabaphathi babo bexesha elinye. IiCredits zemifanekiso: LB.
Ngapha koko, ababaninzi abakukhumbulayo oko UDavid Beckham's Isimo sengqondo sokuxhaphaza eManchester United sakhokelela kumqeqeshi emva koko UAlex Furgeson Ukukhaba ubhobho kweyona superstar. Izihlangu zambetha ngokufanelekileyo u-Beckham ebusweni, isigameko esachaphazela ukuqhubela kwakhe kwi-Real Madrid kwi-2003.
Kutheni i-Untold Biography Facts - Abadlali beBhola ekhatywayo banamakhadi abomvu kakhulu
Amachule akweli candelo aqala ukusuka ekukhuseleni nzima kwabakhuseli beqela eliphakathi kunye nabadlali abanobungangamsha abanobundlobongela kwaye babonise ubukrwada ekuvuseleleni kancinane. Ngenxa yoko, baneerekhodi ezothusayo zoqeqesho eziqinisekiswe ngabathengisi bamakhadi abomvu.
Ukuqala ngokukhuselwa nzima kwabakhuseli, USergio Ramos Uphezulu itshathi njengoko enesona sithuba sokuthumela kwimbali yaseLa Liga. Nangona uthathe umhlala phantsi, USteven Gerrad Uluhlu phakathi kwabadlali abanamakhadi abomvu kakhulu abaye baqala ukuhla benyuka umsele weAnfield kwi bath kwangoko.
USteven Gerrard noSergio Ramos bakumgangatho ophezulu kakhulu kuluhlu lwabadlali abaninzi abathumelayo. IiCredits zemifanekiso: LB.
Ukuqhubela phambili siye phambili Diego Costa Indlela yakhe yokudlala ayinakuyeka ukumfaka engxakini kunye noosompempe naphi na apho ahamba khona. Ngapha koko, ubonwa njengengozi elindele ukwenzeka nangaliphi na ixesha azama ukufumana kwakhona kubakhuseli.
Kutheni i-Untold Biography Facts - Abadlali beBhola ekhatywayo Abangaba Polyglots
Kude kutyalwe imali enkulu kuqeqesho ukuze kubugcisa bokudlala umdlalo omnandi, abanye abadlali baye bahamba iimayile ezongeziweyo ukukholisa abalandeli ngokufunda ulwimi lwendawo yabo yeqela. Umzamo awenzanga ukuba kuphela ubugqwetha bebhola ukuba batyhubeleze ngcono ekuhlaleni kodwa bababeka njengezintandokazi kwimisebenzi yolawulo xa bethathe umhlala phantsi.
Ngaphandle kwe-ado eninzi, abadlali abakwaziyo iilwimi ezininzi babandakanya umntu ovavaya iinjongo Peter Cech ngubani na ogama lakhe linguCzech lithetha iSpanish, isiJamani, isiFrentshi kunye nesiNgesi. Kwakhe, UHenkhkh Mkhitaryan Bathetha ngokutyibilikayo iArmenia, isiPhuthukezi, isiFrentshi, isiTaliyane, isiRashiya, isiNgesi kunye nesiJamani.
Ekugqibeleni kodwa akukho ncinane Romelu Lukaku Obonakalisa ukuba ungumfanekiso ogqibeleleyo we- "hyperpolyglot njengoko athetha ngaphandle kweelwimi ze8." Babandakanya isiFrentshi, isiLingala, isiDatshi, iBelgium, iCongo, isiSuthu, iSpanish, isiNgesi, isiPhuthukezi kunye nesiJamani.
URomelu Lukaku, uHenrikh Mkhitaryan kunye noPeter Cech ziyi-polyglots ezinomdla kwibhola ekhatywayo. IiCredits zemifanekiso: LB.
Kutheni i-Untold Biography Facts - Abadlali beBhola ekhatywayo kunye nabaphathi abaphumeleleyo kwiDigital Education
Indlela abanye abalinganiswa bebhola ekhatywayo abayifumanayo, ukuthatha inxaxheba ekhatywayo kwibhola akuthi kuthintele ukufikelela kwinqanaba eliphezulu lezemfundo, umbono oqinisekileyo obenza babone ukuba baya kubhalisela izidanga zekholeji kwaye bagqibe ukugqiba iinkqubo zabo.
Umdlali wase-Italiya Giorgio Chiellini iludwelisa uluhlu lokuphumelela kwiDyunivesithi yaseTurin ngeMasters yesiDanga kuLawulo lweShishini. Kuba Juan MataUkuba nezidanga ezibini - enye kwintengiso kunye nesayensi yezemidlalo- akwanele. Unomdla wokufunda iPsychology ngexesha lokubhala.
Kwinqanaba labaphathi, ngaba uyazi ukuba UFrank Lampard unesidanga kwisiLatin Vincent Kompany Unesidanga seemasters kulawulo lwamashishini avela kwiAlfred Business Business School? Ewe abadlali bebhola ekhatywayo abanakuba nodumo lobukrelekrele, kodwa abadlali abakhankanyiweyo ngaphambili kunye nabaphathi banegalelo elikhulu ekutshintsheni ingxelo.
Iingqondo ezinetalente. Ukusuka kuLR Giorgio Chiellini, uVincent Kompany, uFrank Lampard noJuan Mata, iiCredits zeMifanekiso: LB.
Kutheni i-Untold Biography Facts - Abanini beKlabhu abatyebileyo
I-English Premier League iye yaba yindawo yokudlala yezigidi zeebhiliyoni ezithenga iiklabhu kwaye zichithe imali ekhohlo, ekunene nakwiziko. Ukuza kuthi ga ngoku eYurophu kukho inkxalabo, ongumnini weqela leqela elityebileyo ngelo xesha lokubhalwa ngu-Sheikh Monsour, umntu owathenga uMzi wedolophu.
Dibana noSheikh Monsour- Umnini weklabhu otyebileyo eNgilane. Ityala kwi Guardian & Mnand
U-Asides wayengumnini weqela, u-Sheikh ukwangu-Emirati wasebukhosini oyisekela-nkulumbuso ye-United Arab Emirates, umphathiswa wemicimbi yobongameli kunye nelungu losapho lwasebukhosini luka-Abu Dhabi. Ungumntakwabo-Mongameli woMongameli we-UAE, uKhalifa bin Zayed Al Nahyan.
Emva kwendoda esisityebi kwibhola iza uJoseph NguJoe Lewis yibhilililiire engaziwayo yaseBritani engumnini weSpurs.
UJoe Lewis (ngasekhohlo), ungumnini weSpurs yenye yezona ndoda zizityebi e-UK
Wena mos uye weva ngoDanial Levy, kodwa uJoe Lewis yindoda ngasemva kweSpurs kunye nomntu otyumbe uLevy njengosihlalo weklabhu.
Ekugqibeleni kunjalo Roman Abramovich, ngubani owaziwa kakhulu ngaphandle kweRussia njengomnini weChelsea FC Nguye umntu oguqula i-Chelsea ukusuka kwi-Premier League kwicala le-Europe.
Uninzi lwabalandeli be-Chelsea bobabini eNgilane nakwihlabathi liphela, Abramovich kungqine ukuba kunokwenzeka ukuthenga ulonwabo.
QHUBEKA: Enkosi ngokufunda i-Nei yethu ye-Untold Biography. Ku- LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ufumana into engabonakali kakuhle, nceda usabelo nathi ngokuphawula ngezansi. Siya kuhlala sixabisa kwaye siyihlonele imibono yakho.
I-Lorenzo Sanz Ibali leNtsholongwane yeNtwana kunye neNqaku leNgcaciso yeBiold
Matshi 29, 2020